ဟန်ဂေရီကော်ပိုရေးရှင်း - ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဟန်ဂေရီဟာဗဟိုဥရောပပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏မြေဧရိယာဆားဘီးယား, အနောက်တောင်ဖို့ Carpathian ဝှမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး 35,900 စတုရန်းမိုင် (93,000 စတုရန်းကီလိုမီတာ), နှင့်မြောက်ဘက်လိုဗက်ကီးယားအသုံးပြုပုံအရှေ့ဘက်ရိုမေးနီးယားနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်, ခရိုအေးရှားတောင်ဘက်, ဆလိုဗေးနီးအနောက်ဘက်, ယူကရိန်းအရှေ့မြောက်ဘက် နှင့်သြစတြီးယားအနောက်မြောက်ဘက်ရန်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်လှည့်ပတ် 10 သန်းမြို့သားတို့ရှိပါတယ်။ ဟန်ဂေရီဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်ဂေရီရဲ့မြို့တော်နှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာဘူဒါပက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ဂေရီ (ကန်ထရိုက်အောင်အိမ်ခြံမြေရယူနှင့်တရားစွဲမှုလိုက်စားအပါအဝင်) ကသူတို့နာမ၌အခွင့်အရေးများဆည်းပူးရန် option ကဲ့သို့ကော်ပိုရေးရှင်းလွတ်လပ်ခွင့်အချို့ငွေပမာဏကိုခွင့်ပြုရသောကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်တွင်၎င်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းထိန်းညှိ။ တက်ကြွစွာဟန်ဂေရီတစ်ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သို့သော်, သင့်လျော်သောဦးစီးဌာနအနေဖြင့်လိုင်စင်လိုအပ်ပါသည်။ ဤနည်းဥပဒေတစ်ခုချွင်းချက်ရှိပါတယ်တည်ရှိ; ကမ်းလွန်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကော်ပိုရေးရှင်းတစ်မပါဘဲဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ် လိုင်စင်.
• ချုပ်ဥရောပတည်နေရာ: ဆာလောင်မွတ်သိပ်ဥရောပ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်ခံရပါကပိုမိုလွယ်ကူသည်အခြားအီးယူနိုင်ငံများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်စေသည်။
• ကြီးထွားလာစီးပွားရေး: ဟန်ဂေရီက၎င်း၏အများအပြားဘဏ္ဍာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုကြုံနေရသည်။
• အီးယူနှင့်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်: ဟန်ဂေရီဥရောပသမဂ္ဂနှင့်နေတိုးနှစ်ဦးစလုံး၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, ဟန်ဂေရီက၎င်း၏ဒေသအတွင်းရှိပြီးသားပေါများဖြစ်ကြောင်းအခွင့်အလမ်းများကို၏အရည်အသွေးမှဖြည့်စွက်, အီးယူအရည်အသွေးမြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစံချိန်စံညွှန်းညီ။
• အစိုးရတည်ငြိမ်ရေး: ဟန်ဂေရီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်စံပြနေရာအရပ်အောင်, တသမတ်တည်းနှင့်ရေရှည်အစိုးရတည်ငြိမ်ရေးသရုပ်ပြခဲ့သည်။
• သာလွန်လုပ်သား: ဟန်ဂေရီအများဆုံးအီးယူနိုင်ငံများထက်ဝေးအနိမ့်လစာမှာမြင့်မားလေ့ကျင့်သင်ကြားလုပ်သားအင်အားရှိပါတယ်။
ဟန်ဂေရီကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားဟန်ဂေရီအတွက်တည်ရှိသောအခြားကော်ပိုရေးရှင်းဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့ကော်ပိုရိတ် name ကိုအတူတက်လာရပေမည်။
န့်အသတ်မိတ်ဖက် (Kkt), ကန့်သတ်မိတ်ဖက် (bt), ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီ (Kft), သို့မဟုတ်ရှယ်ယာ (Rt ကန့်အသတ်ကုမ္ပဏီ: အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုအဆုံးတွင်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြည့်အဝသို့မဟုတ်အတိုကောက်ဗားရှင်းပါဝင်ရမည် Zrt, ဒါမှမဟုတ် Nyrt).
ဟန်ဂေရီကော်ပိုရေးရှင်းလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းနှင့်အလားအလာရှိသောဖြစ်စဉ်ကိုဝန်ဆောင်မှုရရှိရန်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နှင့်ဒေသခံတစ်ဦးလိပ်စာရှိရမည် တောင်းဆိုမှုများ။ ကော်ပိုရေးရှင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိသောမူလတန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာရှိသည်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဟန်ဂေရီအတွက်ရှယ်ယာများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုရွေးချယ်ထားသည့်ကော်ပိုရိတ် entity ဖွဲ့စည်းပုံမှာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအဆမဲ့မိတ်ဖက် (Kkt), ကန့်သတ်မိတ်ဖက် (bt), ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီ (Kft), သို့မဟုတ်ရှယ်ယာ (Rt, Zrt, ဒါမှမဟုတ်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ် Nyrt) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှယ်ယာရှင် (သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး) လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။
တစ်ဦး Kft ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာရှိရမည်။
တစ်ဦး RT ကိုခုနှစ်တွင်3to11 အဖွဲ့ဝင်များအကြားပါဝင်သည်ဟုဒါရိုက်တာတစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းကစီမံခန့်ခွဲရန်အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကောက်စေနိုင်သည်။
Kft: HUF 500,000 (EUR 2,000) ။
ပုဂ္ဂလိက Rt: HUF5သန်း (EUR 20,000); Kfts နှင့်ပုဂ္ဂလိက Rts နှစ်ဦးစလုံးငွေသားပံ့ပိုးမှုများကိုမပါဘဲထူထောင်နိုင်ပါသည်။
ပြည်သူ့ Rt: HUF 20 သန်း (EUR 80,000); ကုမ္ပဏီငွေမပါဘဲထူထောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ပံ့ပိုးမှုများကို.
အခွန်ဟန်ဂေရီအတွက်လက်ရှိအခွန်နှုန်းကို $ 10 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အရေအတွက်ကထက်ပိုမိုမြင့်မားမဆိုဝင်ငွေ 1.74 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိရရှိခဲ့ပြီးအကျိုးအမြတ်အပေါ် 19 ရာခိုင်နှုန်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဟန်ဂေရီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ကိုးရာခိုင်နှုန်းဟာ standard ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။
•အများပြည်သူ Rt HUF 600,000 (EUR 2,400) ဖြစ်ပါသည်;
•ပုဂ္ဂလိက Rt HUF 100,000 (EUR 400) ဖြစ်ပါသည်;
• Kft HUF 100,000 (EUR 400) ဖြစ်ပါသည်;
• Kkt တစ်ခုသို့မဟုတ်မှာ Baht HUF 50,000 (EUR ဖြစ်ပါသည် 200).
တစ်ဦးဟနျဂရေီကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်းကြာပါသည်။ သို့သော်မှတ်ပုံတင်ထံမှကော်ပိုရေးရှင်းစာရွက်စာတမ်းများ၏ပြန်လာရယူရန်နှစ်ပတ်အထိကြာလိမ့်မည်။
ကြီးထွားလာသောစီးပွားရေးကိုကြုံနေရဗဟိုဥရောပတည်နေရာအတွက်ဖြစ်ခြင်းအီးယူနှင့်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းစဉ်: ဟနျဂရေီကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဟန်ဂေရီတည်ငြိမ်သောအစိုးရနှင့်အများဆုံးအီးယူနိုင်ငံများထက်လျော့နည်းကုန်ကျတစ်ဦးထက်သာလွန်လုပ်သားအင်အားပေးထားပါတယ်။